पोलिमर नोट प्रकरण : तेस्रो पटक विशेष अदालतले मगायो अख्तियारको सक्कल फाइल
पोलिमर नोट प्रकरण : तेस्रो पटक विशेष अदालतले मगायो अख्तियारको सक्कल फाइल फाइल नआउँदा पूर्वगर्भनरसहितको मुद्दाकाे अन्तिम सुनुवाइ रोकियो
दुर्गा दुलाल मंगलबार, मंसिर ३, २०७६, ०७:३५
काठमाडौ– विशेष अदालतले नेपाली पोलिमर नोटको छपाइ अस्ट्रेलियामा गर्दा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा तत्कालीन गर्भनरसहित ३ जनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा तेस्रो पटक फाइल मगाउने आदेश गरेको छ।
अन्तिम सुनुवाइका लागि यसअघि विशेषले दुई पटक फाइल मगाउने आदेश गरिसकको छ। मुद्दाको अन्तिम फैसलाका लागि सुनुवाइ गर्न भन्दै विशेषले २०७५ फागुन १० गते अख्तियारसँग भएको सक्कली फाइल र बयानसमेत पेस गर्न आदेश गरेको थियो।
अन्तिम सुनुवाइका लागि यस्तो आदेश गरेको विशेषले करिब एक वर्षपछि २०७६ भदौ ११ मा पुन: फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। सोमबार विशेषले माग गरेको सम्पूर्ण विवरण नआइपुगेपछि पुन: पेस गर्न आदेश गरेको हो।
२०५९ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले १० रुपैयाँको नोट छपाइ गर्दा भएको भ्रष्टाचारमा १५ वर्षपछि २०७५ पुस ५ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गर्भनर तिलक रावल, बैंककै तत्तकालीन नोट विभागका प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौडेल र स्थानीय प्रतिनिधि रहेका मे फ्लावर लिमिटेडका हिमालयबहादुर पाण्डेविरुद्ध २ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विगो असुल हुुनपर्ने दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरू विरुद्ध जनही ९१ लख ९ हजार विगो असुल हुुनपर्ने अख्तियारको दावी थियो।
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनीहरू अदालत उपस्थित भएका थिए। विशेषले थुनछेक बहसमा उनीहरू विरुद्ध जनही १० लाख धरौटी माग गरेको थियो। विशेष अदालतबाट २०७५ माघ ७ गते पूर्वगर्भनर रावल धरौटीमा छुटेका थिए।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशद्वय रत्नबहादुर बागचन्द र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले उनलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरको थियो। रावल छुटेपछि अन्य प्रतिवादीहरु पनि विशेष अदालतबाट धरौटीमा छुटेका थिए।
न्यायाधीशद्वय शिवराज अधिकारी र बालेन्द्र रुपाखेतीको इजलासले अन्तिम सुनुवाइका लागि आवश्यक अङ्ग पुगे नपुगेको हेरेर अन्तिम सुनुवाइतर्फ लैजाने छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले अस्ट्रेलियामा १० रुपैयाँ दरको ५ करोड थान पोलिमर नोट छपाइ गर्दा अस्ट्रेलियाका स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको, गुणस्तरहीन नोट छपाइ भएको, नोट प्रिन्टिङमा मिलेमतो गरी गैरकानूनी रुपमा नोट छपाइ गरेको आरोप लागेको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया अन्तर्गतको ‘नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया’मा सुविधायुक्त पोलिमर नोट छाप्ने टेन्डर दियो। पोलिमर नोट छाप्ने निर्णय तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको थियो।
पहिलोचरणमा रु १० र त्यसपछि क्रमशः २०, ५०, १००, ५०० र एक हजार दरका नोट छाप्ने सर्तमा ठेक्का भयाे। नेपाली एजेन्टसहित तत्कालीन गभर्नर रावल, मुद्रा विभाग प्रमुख पौडेलसहितले घुस लिएको अस्ट्रेलियाको ‘करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन’ को प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको थियो।
अस्ट्रेलियामा खुलासा भएको तथ्य
त्यसलगत्तै नोट छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०६० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नरसहितका २२ जना विरुद्ध उजुरी पर्‍यो। तत्कालीन गर्भनर रावल, तत्कालीन अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र छपाइ कार्यमा संलग्नलाई नेपालमै अनुसन्धान भई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व संलग्न रहेको खुलेलगत्तै अख्तियारले यसलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भन्दै पन्छाएको थियो। त्यसपछिका अख्तियार प्रमुखले पनि उक्त उजुरी छानबिन अघि बढाएनन्। सर्वोच्च अदालतले नोट प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान विवरण माग गर्दा अख्तियारले अनुसन्धान नै नगरी तामेलीमा राखेको जवाफ दिएको थियो।
अस्ट्रेलिया सरकारले समेत छानबिन गरेको आधार देखाउँदै मुद्दा तामेलीमा राखेको जवाफ अख्तियारले सर्वोच्चलाई दिएको हाे। अख्तियारले विवरण अस्ट्रेलिया पठाउने वा नपठाउने विषयमा दर्ता भएको मुद्दालाई देखाएर अनुसन्धान नै नगरी उजुरी तामेलीमा राखेको थियो।
अन्ततः वर्षौंपछि बिहीबार अख्तियारले तामेलीबाट झिकेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
छानबिन प्रभावित पार्ने असफल प्रयास
नोट छपाइको कमिसनमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्म तानिने आशंका उब्जिएपछि आरोपितहरूले अदालत, मन्त्रालय र अन्य सरकारी कार्यालयलाई प्रयोग गरी उक्त मुद्दा ४ वर्षसम्म रोक्न सफल भए।
नोटछपाइको कमिसनमा अनुसन्धानका लागि अस्ट्रेलिया सरकारले विवरण माग गरेलगत्तै आरोपितहरूले २०७० सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्दै रोक्ने प्रयास गरेका थिए। जिल्ला अदालतको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गराउन सफल भएपछि उनीहरू एक वर्षसम्म ढुक्क भए।
तर, उनीहरूको अपेक्षा विपरीत जिल्ला अदालतले १७ कार्तिक २०७१ मा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि अन्य देशमा विवरण पठाउन रोक्ने कानूनी आधार नभएको फैसला सुनायो। जिल्ला अदालतको फैसलाले विवरण पठाउने बाटो खोलेपछि उनीहरू पुनरावलोकनको माग गर्दै मंसिरमा सर्वोच्च अदालत गए। न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले २१ मंसिर २०७१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले अस्ट्रेलियालाई पारस्परिक कानूनी सहायताअन्तर्गत नेपालीको व्यक्तिगत विवरण दिन नमिल्ने आदेश गर्‍यो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि उनीहरूको विवरण पठाउने बाटो पुनः बन्द भयो। कानून मन्त्रालयले समेत यस विषयमा कुनै काम गर्न चाहेन। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएपछि अन्य सरकारी निकायबाट संकलन गर्ने विवरण समेतमा चासो दिइएन।
२३ साउन २०७३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अस्ट्रेलिया सरकारबाट माग भएका कागजपत्र पठाउन कुनै कानूनले नरोक्ने फैसला सुनायो।सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि कानून मन्त्रालयले पुनः अस्ट्रेलिया सरकारलाई पत्र लेखेर विवरण पठाउन ढिलाइ भएको भन्दै आवश्यक भए/नभएको बारे जानकारी माग्यो।
मन्त्रालयको उक्त पत्रको जवाफमा अनुसन्धान जारी रहेकाले सन् १९९९ देखि २००७ सम्मका सम्पूर्ण विवरण पठाइदिन आग्रह गरेको जवाफ आयो। उक्त पत्रको जवाफमा कानून मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा रहेका सम्पूर्ण विवरणहरू पठाइसकेको छ। मन्त्रालयको जवाफपछि अस्ट्रेलियाको महान्यायाधिवक्ता विभागले पनि पोलिमरकाण्डमा छानबिन अघि बढाएको छ।
घटना सार्वजनिक भएपछि नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका तत्कालीन राजदूत ग्लेन ह्वाइटले कानूनमन्त्री र सचिवलाई भेटेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न बारम्बार आग्रहसमेत गरेका थिए। भ्रष्टाचारमा संलग्न र तिनका कम्पनीको बैंक खाता विवरण, व्यावसायिक नियमन विवरण, व्यवसायको सम्पूर्ण विवरण र यात्रा विवरण पठाउन अस्ट्रेलिया सरकारले पत्र नै काटेर औपचारिक आग्रह गरेको थियो।
सरकारले पोलिमर नोट प्रकरणमा आरोपी बनाइएका ६ नेपालीसहित तीन कम्पनीकाे विवरण अस्ट्रेलिया पठाइसकेको छ। कानून मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आरोपी हिमालयबहादुर पाँडे, रमाराज्यलक्ष्मी पाँडे, पृथ्वीबहादुर पाँडे, उपेन्द्रकेशरी पौडेल, केशव खत्री र रावलसहित तीन कम्पनीको बैंक खाता विवरण, व्यावसायिक नियमन विवरण, व्यवसायको सम्पूर्ण विवरण र यात्रा विवरण अस्ट्रेलिया सरकारलाई बुझाएको छ।
घटनामा मेखलोर प्रा.लि., ग्लोबल ग्रुप प्रा.लि. र सुपर थ्रिस्टार ग्रुप प्रा.लि. गरी तीन कम्पनी मुछिएका थिए। यो प्रकरणमा अस्ट्रेलियाको ‘करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन’ले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानमा त्यहाँका अधिकारी जोहन लेकन भे, पिटर ह्याचिन्सन, ब्रिटी ब्रेडी, स्टिभन ओङ, ब्रेहन काल्पेज र ड्यानियल रेड प्रारम्भिक दोषी देखिएका थिए।
अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै अस्ट्रेलिया सरकारलाई पनि घटनाको थप छानबिन गर्न सहज स्थिति बनेको छ।
– आर्थिक वर्ष ०५८/५९मा १०, २०, ५०, १०० र ५०० का छाप्न पोलिमर नोट अस्ट्रेलिया सरकारलाई दिइयो।
– ०५९ सालमा १० रुपैयाँको नोट कमसल भएको पाइयो।
– ०७० मै अस्ट्रेलियाको भ्रष्टाचार अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन गर्भनर र अन्य संलग्नहरूको बैंक खाता र विस्तृत विवरण पठाउन माग गर्‍यो।
– अस्ट्रेलिया सरकारले विवरण माग गरे पनि आरोपितहरू काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगे।
– जिल्ला अदालतले पारस्परिक सहायता कानूनमा हस्ताक्षर गरेको नदेखिएको भन्दै तत्काल नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।
– जिल्लाको फैसला आए लगत्तै उनीहरू फेरि सर्वोच्च अदालत पुगे।
– ०७१ मंसिर २१ गते न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले अस्ट्रेलियालाई पारस्परिक कानूनी सहायता दिन नमिल्ने आदेश जारी गर्‍यो।
– ०७३ साउन २३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले माग भएका कागजपत्र पठाउन कुनै कानूनले नरोक्ने फैसला सुनायो।
– सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि कानून मन्त्रालयले अस्ट्रेलिया सरकारलाई विवरण पठाउनुपर्ने/नपर्ने भनी पत्र लेख्यो।
– ०७४ साउन २५ कानून मन्त्रालयको पत्रमा जवाफ दिँदै सन् १९९९ देखि २००७ सम्मका सम्पूर्ण विवरण पठाउन अस्ट्रेलियाले पत्र लेख्यो।
– कात्तिक ७ गते कानुन मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक, परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै आरोपितहरूको विवरण उपलब्ध गराउन भन्यो।
– ०७४ चैत २८ गते मन्त्रालयले सम्पूर्ण विवरण अस्ट्रेलिया पठायो।
पोलिमर नोट प्रकरण : पूर्वगभर्नर रावल १० लाख धरौटीमा छुटे
पोलिमर नोट प्रकरणमा सर्वोच्चको प्रश्न– अख्तियारको रहस्यमय मौनता किन?
पोलिमर नोट प्रकरण : नेपालका उच्च राजनीतिक व्यक्तिसहित पूर्व गर्भनरविरुद्ध अस्ट्रेलियामा भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन हुदै